အကောင်းဆုံး Zombies Gameများ (For Android) ~ ဘလော့ခရီးသည်
အကောင်းဆုံး Zombies Gameများ (For Android)
သင့်အနေနဲ့ Androidဖုန်းတစ်လုံးမှာ Zombies Gamesကောင်းကောင်းဆော့ချင်ပါသလား။ Dead Trigger2 ရှိပါတယ်။ မတူညီတဲ့နေရာတွေမှာ မတူညီတဲ့Zombies Characterအမျိုးမျိုး Play Roleအမျိုးမျိုးနဲ့ ကစားရမှာဖြစ်ပြီး သင်ကိုင်ဆောင်ရမယ့် လက်နက်တွေကလည်း တကယ့်ကိုSpecail တွေပါ။ တကယ်ထိတ်လန့်စရာ Zombiesတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး သင့်စိတ်ကိုဖမ်းစားနိုင်မှာ သေချာတဲ့ Gameပါ။ Android Version 4.0.0 မှ စပြီး ထည့်သွင်းကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Apk + Data ဖြစ်ပြီး Data Fileကိုတော့ Android > Data > Obb မှာ ထည့်သွင်းကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Download APK => Dead Trigger2APK (21MB)
Download APK(Unlimited Money+Weapon) => Unlimited Version (21MB)
Dwonload Data File Zip => Data File (499MB)
ဒါကတော့ နာမည်ကျော် Walking Dead Seriesကို အခြေခံပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ Gamesပါ။ သူလည်း Seasonအလိုက်ထွက်ရှိတဲ့ Gameဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ရွေးချယ်မှုအပေါ်မှာ Gameရဲ့ Resultက အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားမှာပါ။ တစ်ခါပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင် နောက်တစ်ကြိမ်မှာ မတူညီတဲ့ Resultတွေ ပုံစံတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ်ကောင်းတဲ့Gameပဲဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက်ကတော့ နည်းနည်းများပါတယ်။ Apk + Data ဖြစ်ပြီး Data Fileကိုတော့ Android > Data > Obb မှာ ထည့်သွင်းကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ System Requirements :
Download APK => Walking Dead Season One
Download Data => Data File (1.09 GB)
ဟဲဟဲ . . ပြောဖို့သိပ်မလိုတော့ဘူးထင်တယ်။ Plants Vs Zombies2ဂိမ်းလေးမှာ Plants Type / Zombies Types အသစ်တွေ ပါဝင်လာပါတယ်။ ကလေးဂိမ်းလို့တော့ မပြောပါနဲ့။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ လူအများနျှစ်သက်သဘောကျမှုကို ရရှိထားတဲ့ Gameပါ။ ကိုယ့် Brainကို Zombiesတွေရန်က ကာကွယ်ဖို့ အပင်လေးတွေ စိုက်ကြရအောင် :) Apk + Data ဖြစ်ပြီး Data Fileကိုတော့ Android > Data > Obb မှာ ထည့်သွင်းကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Download Apk => Plants Vs Zombies2(11MB)
Download Apk(MOD Allstars) => Plants Vs Zombies MOD(11MB)
Download Data => Data File(597MB) 4.Call Of Duty : Black Ops Zombies
PS3 နဲ့ X-box 360 အတွက်သာ ထွက်ရှိထားတဲ့ Call Of Duty: Black Ops Zombiesကို Androidပေါ်မှာ ဆော့ကစားလို့ ရပါပြီ။ ဆော့ဖူးခဲ့သမျှ Zombies Gameတွေထဲမှာတော့ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ လူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံပျက်ကြီးထဲမှာ ကမူးရူးထိုး ပြေးလာနေတဲ့ Nazi Zombiesတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ။ လက်နက်အမျိုးမျိုးကို အသုံးချပြီး ကိုယ့်အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် ပြေးလွှားနေရမှပါ။ Wifi နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Muti-Playerကစားလို့ရတဲ့Gameဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းသုံးယောက်နဲ့ပေါင်းစည်းပြီး လေးယောက်သားအော်ဟစ်ကစားရမဲ့ Gameလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Apk + Data ဖြစ်ပြီး Data Fileကိုတော့ Android > Data > Obb မှာ ထည့်သွင်းကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ကျွန်တော်ကတော့ APKကို Installလုပ်ပြီး Dataကိုတော့ APKထဲကနေတစ်ဆင့်Downပါတယ် , Errorတက်မှာစိုးလို့ပါ :D )
Download APK => COD:BOZ
Download Data => Data File(144Mb)
မတော်တဆလေယာဉ်ပျက်ကျတာကနေ Zombiesတွေကြားတဲ့ ကျသွားရတဲ့ စစ်သားတစ်ယောက်နေရာကနေ ကစားရအောင်ဗျာ။ Zombiesတွေနဲ့ မထိရအောင် ရှောင်ပြေးရမယ်။ လမ်းမှာပေါ်လာတဲ့ Zombiesတွေကို ရှင်းပစ်ရမယ်။ မနားတမ်းပြေးလွှားနေရမယ်ဆိုတော့ သာမန်Zombies Gameတွေလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်နက်လေးတစ်ခုနဲ့ Zombiesတွေကြားမှာ သည်းထိတ်ရင်ဖို ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Download Apk=> Into The Dead (67MB)
Download Apk MOD => Into The Dead MOD (67MB)
6.Zombies Tsunami (V 3.0. Updated!) ၀ူးဝူးဝါးဝါး . . . ဦးနှောက်စားကြမယ်ဟေ့။ Zombie Tsunami Gameလေးပါ။ အရမ်းဆော့လို့ကောင်းပါတယ်။ အပျော်ဆော့ရတဲ့နေရာမှာ အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ပါ။ Zombieလေးတွေ နေရာကနေ ကစားရမှာဖြစ်ပြီး ထူးထူးခြားခြား Abilityတွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Running Gameမျိုးဖြစ်ပြီး မိမိရဲ့ Controlလုပ်နိုင်မှုက မိမိရဲ့ Scoreကို သတ်မှတ်ပေးမှာပါ။ (ကျွန်တော်ကတော့ Brainကို 88ခုထိပဲ ရသေးတယ် :D )
Download Apk => Zombie Tsunami (57MB)
Download Apk Mod => Zombie Tsunami MOD(57MB) 7.SAS4Zombieတွေကြားထဲမှာ ပြေးလွှားရင်း ရှင်သန်အောင်နေရမှာပါ။ Zombiesတွေကို သတ်ပြီး ပတ်ပြေးနေရမယ့် ဂိမ်းလေးပါ။ ဆော့လို့ကောင်းပါတယ်။
Download APK => SAS4APK (97MB)
Download APK => SAS4(MOD)(100MB)
Posted in: Android, Android Games, Download